बीमा खरीद गरेर तपाईं कति पैसा बचत गर्नुहुन्छ? | अर्थव्यवस्था वित्त
बीमा खरीद गरेर तपाईं कति पैसा बचत गर्नुहुन्छ?
जोस रीसियो | | वित्तीय उत्पादनहरू, बीमा
बीमाकर्ताहरू आफ्नो ग्राहकहरु लाई 47,90 बचत गर्नुहोस् प्रत्येक युरो को लागी कि तिनीहरूले ठगी को सम्भावित केसहरु को छानबीन को लागी विनियोजित। यो रिपोर्टको एक निष्कर्ष हो। स्पेनिश बीमा धोखाधडी। वर्ष २०१ that जुन भर्खरै बीमा संस्थाहरू (आईसीईए) बीच सहकारी अनुसन्धान प्रकाशित गरिएको छ। 2018१ बिमा कम्पनीहरूले पठाएको जानकारीका साथ अध्ययन गरिएको हो। यी संस्थाहरू, जसको बजार शेयर 41२% छ, ले गत वर्ष १52 fraud फ्रडका प्रयासहरू पत्ता लगायो, हरेक घण्टा २०।
यो आंकडा अनुरूप छैन ठगीको कुल संख्या २०१ 2018 मा स्पेनमा देखा पर्‍यो, तर कडाईका साथ ती आईसीईएलाई अध्ययन सहभागीहरूले रिपोर्ट गरेका थिए। यसको उच्च प्रतिनिधित्वले, तथापि, देशमा यो घटनाको बारेमा विभिन्न निष्कर्षहरू प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ। यो याद गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि बीमा धोखाधडी एउटा अपराध हो जसले समग्रमा समाजलाई हानी गर्दछ।
अध्ययनले यो धेरै स्पष्ट बनाउँदछ कि बीमाकर्ताहरूले उनीहरूका ग्राहकहरू द्वारा भुक्तानी गरेको पैसाबाट जनताको समस्याहरू समाधान गर्दछन्। त्यसकारण, जब एक जालसाजीले एक अनुचित वा बढाइचढाइ दाबी खडा गर्छ, उसले के गर्छ भने बाँकी सम्मानित नीतिधारकहरूको खर्चमा आफूलाई सम्पन्न गर्ने प्रयास गरिन्छ। यो पत्ता लाग्यो कि २०११ देखि २०१ 2011 सम्म, साना जालसाजीहरूले उपस्थिति पाइरहेका छन्। यस गतिशीलले गैर-पेशेवर धोखाधडी प्रयासहरू बढेको देखाउँदछ। तर २०१ in मा क्षुद्र घोटाला स्थिर छ। हालमा, पत्ता लगाइएको छलछामको एक तिहाई भन्दा बढी (.36,2 500.२%) ले 63,8०० भन्दा कम युरोको दाबी समावेश गरेको छ र बाँकी दुई तिहाई (.XNUMX XNUMX..XNUMX%) ले अधिक रकमको भुक्तानीमा संलग्न रहेको छ।
1 धोखा कि बीमा मा हुन सक्छ
2 लगानी गरिएको पैसा फिर्ता गर्नुहोस्
3 बीमा वर्ग
4 स्वरोजगार कामदारहरूको बीमा
5 वैकल्पिक कप्रेजहरू
6 भुक्तानी सुरक्षा
धोखा कि बीमा मा हुन सक्छ
ICEA डाटा कसरी देखाउँछ Fraud२. fraud% जालसाजी घटनाहरू पत्ता लाग्यो यो कार बीमा मा दिइएको छ। यस शाखाको प्रधानता यसको उच्च उपस्थितिको कारण हो। कुनै छक्कलाग्दो कुरा होइन, मोटर वाहन बीमाको साथ सर्किट गर्नु अनिवार्य छ। सुन्दरि लाइनहरु घोटाला प्रयास को एक अर्को .30,3०..5,8% समावेश गर्दछ। यस कोटी अन्तर्गत घर, व्यवसाय, समुदाय, एसएमई र नागरिक दायित्व नीतिहरू छन्। अर्को accident.1,2% धोखाधडी प्रयासहरू जीवन, दुर्घटना र स्वास्थ्य लाइनहरूमा देखा पर्दछ। त्यो हो, तथाकथित व्यक्तिगत बीमा मा। जबकि यसको विपरितमा, बाँकी १.२% ब्यापारको अन्य रेखासँग मिल्छ।
अर्कोतर्फ, अध्ययनले यो पनि देखाउँदछ कि धोखाधडीको अनुसन्धानमा एक बीमाकर्ताले गरेको औसत लगानी २ 247,90eयुरो छ। यद्यपि यो वस्तुको व्यापारको एक रेखा देखि अर्कोमा केहि फरक हुन्छ। खुल्ला व्यक्तिगत बीमा (जीवन, स्वास्थ्य, घर, आदि) औसत खर्च 591,10 379,50१.१० युरो हो। यस बीचमा, कार बीमामा यो 153,80 475,90।। .० युरो हुन्छ। सम्पत्ति बीमा र नागरिक दायित्वमा प्रयास गरिएको जालसाजीको अनुसन्धानले १XNUMX० यूरो लगानी गर्दछ। अन्तमा, विषम श्रेणी "अन्य रेखाहरु" मा यो वस्तु XNUMX XNUMX ० युरो हो।
लगानी गरिएको पैसा फिर्ता गर्नुहोस्
प्रति अनुसन्धान औसत प्रतिफल, हाम्रो देश मा बीमा क्षेत्र मा यो जानकारी को शुरू मा संकेत गरीए, each 47,90eयुरो प्रत्येक युरो लगानी को लागी हो। तर यहाँ पनि किसिम किसिमको धोखाधडी विश्लेषण गरिएको छ त्यसमा निर्भर भिन्नताहरू छन्। जबकि व्यक्तिगत बीमामा १181,60१.38० युरो भुक्तानी अनुसन्धानमा खर्च गरिएको प्रत्येक यूरोको लागि वेवास्ता गरिएको छ, "अन्य" वर्गमा यो राशि उल्लेखनीय रूपमा कम छ:eXNUMX यूरो।
अर्को तर्फ, धोखाधडीको प्रकार छ कि प्रतिबद्ध गर्न को लागी बिमा को प्रकार मा निर्भर गर्दछ। गाडीमाउदाहरण को लागी, असंबद्ध दाबीहरू धोखाको सबैभन्दा सामान्य प्रकार हो। विशेष रूपमा, यो विश्लेषण गरिएको s 37,4..19,4% फ्रडमा भयो। पूर्व-अवस्थित चोटपटक वा क्षतिलाई लुकाउनु महत्त्वपूर्ण छ। यो विश्लेषण गरिएको केसहरूको १ XNUMX ..XNUMX% मा देखा पर्दछ। एक धेरै सान्दर्भिक अंश हो जुन स्पेनी अर्थतन्त्रको यस महत्त्वपूर्ण शाखामा कम्पनीहरूलाई असर गरिरहेको छ। प्रयोगकर्ताहरूको साथ जो निश्चित गर्नका लागि उत्पादनहरूको यस वर्गको अनुबंध गर्छन्, या त तिनीहरूको जीवन वा तिनीहरूको केही भौतिक वस्तुहरू।
विभिन्न नीतिहरूमा, एक श्रेणी जसले बहु-खतरा बीमा समावेश गर्दछ, सबैभन्दा अक्सर दावीहरू नक्कल गरिन्छ (२.28,2.२%) यस बीच, व्यक्तिगत बीमा घोटाला प्रयासहरू (जीवन, दुर्घटना, वा स्वास्थ्य) प्राय: पूर्व-अवस्थित चोटहरू वा क्षतिहरू लुकाउँछन्। यस श्रेणीमा fraud१..51,9% धोखाधडी भएका केसहरू छन्। "अन्य" कोटिमा, पूर्व अवस्थित क्षतिको (२.26,7..25,1%) को छुट्टयाउने कुरा र असमान अनुरुप दावीहरू (२.XNUMX.१%) बाहिर उभिन्छन्।
जे भए पनि यो एकदम गतिशील क्षेत्र हो जसमा व्यावहारिक रूपमा सबै बिमा गर्न सकिन्छ। घरको सामग्रीबाट घरपालुवा जनावर कि यो बीमा उत्पादन को धारकहरु छ। यो सबै, तपाईंको वास्तविक आवश्यकताहरूमा निर्भर गर्दछ र प्रत्येक केसमा यो फरक हुनेछ। यद्यपि त्यहाँ केही परिवारहरू छन् जससँग पॉलिसीमा सम्झौता छैन, सोच्दै कि तिनीहरू आउँदो वर्षहरूमा पैसा बचत गरिरहेका छन्। अन्य प्राविधिक विचारहरू पछाडि जुन उत्पादनमा आफै सम्बन्धित छ। एक बानी जुन हालका बर्षहरूमा परिवर्तन हुँदैछ स्पेनी परिवारहरूले संस्कृतिमा परिवर्तनको परिणाम स्वरूप।
स्वरोजगार कामदारहरूको बीमा
हालका वर्षहरूमा सबैभन्दा ठूलो नवीनताहरू मध्ये एक स्व-रोजगारदाताहरू वा अधिक आत्म-रोजगारदाता भनेर चिनिने बीमाको उपस्थिति हो। विशेष कमजोरीका कारण यी व्यक्तिहरूले आफैंलाई भेट्टाउँछन् र तिनीहरू निश्चित तरिकामा उनीहरूलाई थप बीमा उत्पादन आवश्यक पर्दछ जुन उनीहरूको जीवनको केही खास क्षणहरूमा उनीहरूलाई बचाउन सक्छ। यस्तो हदसम्म धेरै क्रेडिट कार्डले यी सुविधाहरूको बीमा बोक्दछ, यद्यपि मासिक शुल्कको भुक्तानीको साथ २० र २०० युरो बीचमा। धेरै जटिल परिस्थितिहरूमा दिने जबदेखि तिनीहरू बैंकहरू आफैंले लागू गर्छन् प्रयोगकर्ताको सहमति बिना।
जे भए पनि, बीमा कम्पनीहरूले दुर्घटना बीमा प्रस्ताव गर्दछ स्वयं स्वरोजगारको लागि जुन दुई बिमाहरू कभर गर्दछ अघिल्लो प्रस्तावमा जस्तै, दुर्घटना र बिमारी। यसले पूर्ण व्यावसायिक अक्षमताको लागि कभरेज, कुनै पनि व्यावसायिक गतिविधि, 60.000०,००० यूरो सम्मका monthly बर्षको मासिक आम्दानी 8% वार्षिक पुनर्मूल्यांकनको साथ, करीव २०,००० युरो सम्म। अर्कोतर्फ, अन्य बीमा कम्पनीहरूले यी व्यावसायिक क्षेत्रहरूको लागि दुर्घटना बीमा मार्फत यी खास उत्पादहरू विकास गर्ने निर्णय गरेका छन्। जसमा दुर्घटनामा मृत्यु, स्थायी र अस्थायी अक्षमता वा पूर्ण वा पूर्ण अक्षमता कभर हुन्छ। यस प्रस्तावको मुख्य योगदान यो हो कि यो स्वयं मालिक हो जसले पूंजीको मात्रा छनौट गर्न सक्दछ।
जे भए पनि, स्वरोजगार कामदारहरूका लागि बीमाको यस वर्गमा, वैकल्पिक कभरेजलाई अबदेखि आफूलाई जोगाउन मद्दत गर्न सकिन्छ। यस अर्थमा, स्वरोजगार कामदारहरूले वैकल्पिक कभरेजको रूपमा करार गर्न सक्दछ तथाकथित बिरामी बिदा बिमा, निम्न आपतकालिनहरूको साथ:
कुनै पनि कारणका लागि अस्पताल भर्ती: यस कभरेजको लागि पॉलिसी धारकले थप रकम पाउने छ यदि, बिरामी वा दुर्घटना भएको खण्डमा, उसलाई कम्तिमा २ 24 घण्टा अस्पतालमा भर्ना गरियो।
गतिविधि को समाप्ति: यदि बीमा गरिएको व्यक्ति स्वरोजगार छ र कानून द्वारा निर्धारण गरे अनुसार स्वरोजगार सामाजिक सुरक्षा, म्युचुअल, मोन्टेपियो वा यस्तै संस्थामा योगदान पुर्‍याइरहेको छ भने, उनीहरूको गतिविधिको अनैच्छिक रोकावटको लागि मासिक क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टी हुनेछ।
पछिल्लो विकल्पहरू मध्ये एक हो जुन बीमा कम्पनीहरूको डरका कारण विकसित भएको छ जुन उनीहरूको ग्राहकले आफ्नो मासिक भुक्तानी लिन सक्नेछनन परिणामको रूपमा आयमा कमी वा केवल किनभने तिनीहरू कुनै व्यावसायिक वा व्यावसायिक गतिविधि गर्दैन। २०० crisis र २०१२ बीचको आर्थिक संकटपछिको वर्षहरूमा यति धेरै पटक। र यसको परिणाम स्वरोजगार कामदारहरूको लागि विशेष कभरेज देखा पर्दछ।
जे भए पनि, नीतिहरूको यस वर्गको उपयोगिता दिईन्छ जब यो इच्छुक पार्टी द्वारा हस्ताक्षर गरिएको हुन्छ। र जब यो अन्य बैंकि products उत्पादनहरूको औपचारिकरणको माध्यमबाट थोपर्दछ। उदाहरण को लागी, क्रेडिट र डेबिट कार्ड वा कुनै प्रकारको वित्त को विशिष्ट मामलाहरुमा। जहाँ यो एक अपरेशन हुन सक्छ कि धेरै लाभदायक छैन साना र मध्यम लगानीकर्ताहरूको चासोको लागि। कुरा गर्न को लागी कि यो एक प्रक्रिया द्वारा बनाएको एक पार्टी द्वारा लगाएको कार्य हुन सक्छ। जबकि केहि अवस्थाहरूमा, यसले महत्त्वपूर्ण खर्च समावेश गर्दछ जुन बीमा कम्पनीहरूको अपेक्षाहरू भन्दा माथि छ।
अर्कोतर्फ, हामी यो बिर्सन सक्दैनौं कि सम्झौता बीमाको अर्थ कुनै पनि समय र कुनै पनि परिस्थितिमा उत्पन्न हुने कुनै पनि घटनामा महत्त्वपूर्ण बचत हुन सक्छ। केहि अवस्थाहरूमा, धेरै महत्त्वपूर्ण रकमको साथ, घर बिमाको साथ निश्चित आवृत्तिसँग हुने गर्दछ। यस बिन्दुमा कि तपाइँ घरमा केहि रोजगारको लागि खर्चलाई टाढा राख्न सक्नुहुन्छ, जुन यो सबै कुरा पछि हुने हो। कुरा गर्न को लागी कि यो एक प्रक्रिया द्वारा बनाएको एक पार्टी द्वारा लगाएको कार्य हुन सक्छ। जबकि केहि अवस्थाहरूमा, यसले महत्त्वपूर्ण खर्च समावेश गर्दछ जुन बीमा कम्पनीहरूको अपेक्षाहरू भन्दा माथि छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अर्थव्यवस्था वित्त » वित्तीय उत्पादनहरू » बीमा » बीमा खरीद गरेर तपाईं कति पैसा बचत गर्नुहुन्छ?
यस गर्मीमा पोर्टफोलियोमा कुन मानहरू समावेश गर्ने?
इटालीमा सम्भावित चुनावहरूले पेरीफेरल स्टक बजारमा दस्तक दिन्छ